एमसीसीको उपाध्यक्षलाई भेटेपछि फेरियो प्रचण्डको बोली ? पास गर्नै हुन्न भनेका प्रचण्डले उपाध्यक्ष समक्ष जब यस्तो भने – Sunaulo Nepal TV
एमसीसीको उपाध्यक्षलाई भेटेपछि फेरियो प्रचण्डको बोली ? पास गर्नै हुन्न भनेका प्रचण्डले उपाध्यक्ष समक्ष जब यस्तो भने
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै अमेरिकी सहयोगी परियोजना एमसिसीलाई आगाडी बढाउन सकिने बताएका छन्।
सो अवसरमा उपाध्यक्ष फतिमाले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यलाभको समेत कामना गरेका थिए । बिहीबार नेपाल आएकी उपाध्यक्ष फतिमाले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरिसकेकी छिन् । एमसिसीका बारेमा परस्परविरोधी मत रहेका बेला आयोजनाका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यका साथ फतिमा नेपाल आएकी हुन् ।
Previous एमसीसी टोलीको धम्की- MCC पारित गरे नेपालको हित हुन्छ, नगरे अहित
Next दु,खद खबर – प्रहरी हिरासतम रहेका हरी उदासी बारे यस्तो खबर आएपछी सबितालाई के भयो यस्तो ? भिडियो सहित